DHAGEYSO:C/rashiid Janan oo markale sheegay inay dib ugu laabanayaan Beledxaawo | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:C/rashiid Janan oo markale sheegay inay dib ugu laabanayaan Beledxaawo
DHAGEYSO:C/rashiid Janan oo markale sheegay inay dib ugu laabanayaan Beledxaawo
Wasiirka Amniga Maamulka Jubbaland C/rashiid Janan ayaa markale ka hadlay dagaalkii ka dhacay degmada Beled-Xaawo ee goblka Gedo iyo qorshaha kaga degsan degmadaas maadaama Ciidamada uu hogaaminaya Looga awood roonaaday dagaalkii 25 bishii hore ka dhacay degmadaasi.
Wasiir Janan ayaa sheegay in sababo jiray aawgeed ay uga baxeen degmada Beled-Xaawo kadib markii ay Ciidamada dowladda kala wareegeen degmadaasi.
Waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay dagaalka u adeegsatay hubkii dowladda turkiga ugu deeqday Soomaaliya ee loogu talo galay in lagula dagaalamo Al-Shabaab.
Cabdi Rashiid Janan oo wax laga weeydiiyay Ciidamadii ay dowladda Soomaaliya sheegtay inay ku qabatay dagaalkii Beled-Xaawo ayaa qirtay in dagaalka looga qabtay 16 askari halka uu sheegay in 36 kale ay iyagu isdhiibeen.
Wuxuu sidoo kale sheegay in ay Ciidamadoodu Magaalada isaga Baxeen markii ay Qataro badan arkeen balse aysan ahayn inay gabi ahaanba sidaas Magaalada uga baxeen ee ay rajaynayaan in markale lagu soo laabta sida uu sheegay.
Dowladda dhexe ee Soomaaliya & Maamulka Jubbaland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dagaalkii ka dhacay degmada Beled-Xaawo ee gobolka Gedo 25-kii Bishii la soo dhaafay ee Janaayo, iyadoo midba midka kale uu guulo ka sheegtay dagaalka sidoo kalena ku eedeeyay inay gobolka gedo dhibaato ka wado.
Previous articleMilitariga Myanmar oo talada dalkaas la wareegay
Next articleDHAGEYSO:Mid ka mid ah beelaha dego ismaamulka Mandera oo hal goob ah labo nabadoon ku wada doortay